Amaqhinga - i-Creativos kwi-Intanethi | I-Creativos ezikwi-Intanethi (Iphepha 2)
Ngaba uyafuna ukufunda indlela yokuyila kwi-Word? Nangona ingeyiyo inkqubo efanelekileyo yokuyenza, unokufumana iziphumo ezilungileyo.
Ngaba kufuneka ukrwelele umgca kwiPDF etshixiweyo kodwa ungazi ukuba ungagqamisa njani isicatshulwa kwi-pdf ekhuselweyo? Sichaza iinketho onazo.
Ngaba uneefoto ezininzi kwaye ungathanda ukuzidibanisa? Ngaba awuyazi indlela yokwenza ikholaji ngeefoto? Sichaza indlela yokwenza ngeendlela ezininzi.
Ngaba uyazazi iingcamango zoyilo kwi-Power Point? Ngaba uyazi ukuba zenziwa zisebenze kwaye zisetyenziswe njani? Fumana apha ngezantsi kwaye wonge ixesha elininzi emsebenzini
Ngamanye amaxesha kuye kufuneke senze i-CV esifanelayo kodwa singazi ukuba masiqale ngaphi. Kule post sikucacisela yona.
Ngaba uyafuna ukwazi indlela yokwenza blur kwi Photoshop? Nanga amanyathelo ekufuneka uwathathe kunye neziphumo oya kuzifumana ukuba uyenza ngokufanelekileyo.
Ikhowudi yombala yinxalenye yolwazi olubaluleke kakhulu kubaqulunqi njengoko unokwazi uhlobo oluchanekileyo lombala woyilo lwakho.
Fumanisa indlela yokuguqula umfanekiso ube ligama ukuze uhlele ngeendlela ezahlukeneyo kunye neziphumo onokuzifumana kwiiprojekthi zakho.
Ngaba uyazi ukuba ungayisusa njani imvelaphi kumfanekiso okwi-intanethi? Sikunika ezinye iinkqubo zokwenza lo msebenzi ukhawulezayo nolula ngemizuzwana.
Ngaba kuya kufuneka ususe amaphepha kwi-PDF kwaye awazi ukuba ungayenza njani? Fumanisa ngezi zixhobo zasimahla ukuba zilula kangakanani kwaye zibiza malini.
Ngaba uyafuna ukuyila ikhava yencwadi kunye neqweqwe elingasemva? Awazi ukuba njani? Sikunika izitshixo zokwenza ukuba kubonakale ngathi zezobuchwephesha.
Ngaba ukhe wakhangela kwi-Intanethi kwaye wafumana ifonti oyithandayo? Andiqinisekanga ukuba ngowuphi umthombo? Sikunika izixhobo.
Ufuna ukuthumela iifayile ezinkulu? Sikunika iindlela ezininzi zokuyifumana ngokuxhomekeke kubungakanani beefayile zakho kunye nendlela ofuna ukuyithumela ngayo.
Kule posi siza kukubonisa indlela yokubeka i-induction yesiFrentshi kwiLizwi, inyathelo ngenyathelo kunye nokulungelelanisa inkqubo kwi-Mac nakwiWindows.
Kule tutorial ndiza kukufundisa indlela yokwenza umphumo we-watercolor kwi-Photoshop. Ilula kwaye ikhangeleka intle.Funda iposti kwaye uzame!
Ukuba uthanda i-Photoshop kakhulu kwaye usebenzisa iibrashi, khangela ukuba zeziphi ezona bhrashi ze-Photoshop zibalaseleyo zokufaka simahla.
Ukuba ufuna ukucinezela ividiyo ukuze ubunzima bube lula kwaye ungathumela ngaphezulu kwe-Intanethi, sikunika izitshixo zokwenza ngokulula.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba uyenza njani i-gif kwividiyo? Sukuba nexhala, apha sikunika iinkqubo kunye nokusetyenziswa ukuze ukwenze oko ngemizuzu
Ngaba uyafuna ukufunda indlela yokutyala umfanekiso kunye noMzekeliso? Sikunika iindlela ezininzi zokukufeza ngokwenjongo yakho.
Fumanisa ukuba ungahamba njani ukusuka kwiJPG ukuya kwiLizwi kwimizuzwana embalwa kwaye ngeendlela ezahlukeneyo ukuze ukhethe eyona ikulungeleyo.
Kule posi ndiza kukufundisa indlela yokufiphaza imvelaphi yomfanekiso ngeFotohop ngobuqili obulula.
Indlela yokuhambisa imiphetho kwi-Photoshop kunye nokuphucula ukhetho lwakho
Kule tutorial sifundisa iqhinga elilula kakhulu lokuthambisa imiphetho kwi-Photoshop kunye nokuphucula ukhetho lwakho.
Fumana ukuba ungawuguqula ngokulula njani umfanekiso ube yiPDF ngeendlela ezininzi onokukhetha kuzo. Khetha okona kulungileyo kuwe!
Ngaba uyafuna ukuguqula igama libe jpg? Sikunika izitshixo ukuze wazi ifomathi nganye kunye neenkqubo ezahlukeneyo ukufezekisa injongo yakho.
Ukuba unayo uxwebhu lwePDF kwaye ufuna ukuyiguqula ibe liLizwi, apha sikunika iindlela ezininzi onokuguqula kuzo uxwebhu lwePDF kwiLizwi.
Ngaba uyafuna ukufunda ukutshintsha umbala kwi-Photoshop? Ngenisa esi sithuba kwaye ufunde iqhinga lokwenza kube lula kwaye kukhawuleze.
Ukuba uhlala ufuna ukuchonga ubuchwephesha bomfanekiso, ibhena ... kwaye awazi, ngoku sikunika izitshixo zokukufezekisa.
Ithuba elitsha kwiFotohop ukuze ukwazi ukutshintsha isibhakabhaka ngonqakrazo olunye kwaye oko kusenza ukuba senze utshintsho olukhulu.
Kukho uthotho lweendlela zokuphumeza ulungelelwaniso emsebenzini wakho kwaye izinto zalo zilunge ngokugqibeleleyo. Nazi ezinye zazo.
Ngaba uyafuna ukuhlaziya loo fanitshala indala ingasayi kukuxelela nto? Kule posi uya kufunda iindlela ezahlukeneyo zokubuyiselwa kweenkuni, masihambe!
Iindlela ezisisiseko zokutyhila amandla akho ngokupenda i-watercolor
Abazobi abaninzi kwimbali baye bakhohliswa bubugcisa be-watercolor. Ngena kwaye ubazi bonke ubuchule onokuthi ubusebenzise.
Hambisa ubugcisa bokugqibela, ulwazi olusisiseko
Kuya kufuneka sise umzobo wokugqibela kumshicileli. Ziyimfuneko ukuze umphumo ungabinasiphako. Sikufundisa ukuba uyenze.
I-Squoosh yinkqubo entsha yewebhu evela kuGoogle ekuvumela ukuba ucinezele imifanekiso ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho kwinkqubo yoxinzelelo.
Ukubaluleka kokwenza iMotor elungileyo
Ukwenza umthengi amkele uyilo lwethu kufuneka senze intetho elungileyo. Funda ukuba ungayifumana njani enkosi.
Ukuthatha isigqibo emsebenzini kufuneka sisebenzise amaqhinga. Sikufundisa iindlela ezimfutshane zokugcina ixesha elininzi kangangoko kunokwenzeka.
Ukuba ufuna ukuba yinkosi kwi-Photoshop okanye kwi-Illustrator sikukhuthaza ukuba ukhuphele infographic ngazo zonke iindlela ezimfutshane zekhibhodi.
Sikufundisa ubuqhetseba ukuze iiprojekthi zakho zoyilo zixabiseke ngokwezoqoqosho, inyathelo lokuqala kukubeka ixabiso ngexesha lomsebenzi.
Ukuba ufuna ukufumana okungakumbi ngexesha lakho lokusebenza kunye neFotohop, ungayisusa i-RGB yokukhetha umbala xa uvula umfanekiso.
Isishwankathelo luxwebhu olusebenzela ukuphuhlisa isindululo sokuqala senkcazo yeprojekthi esifuna ukuyenza.
Ufuna ubuchule bokuhambisa ulwazi ngokucacileyo nangokubonwayo. Ulwazi lweqela kunye nedatha. I-infographics liqabane elungileyo.
IAdwords zikaGoogle sisixhobo sentengiso sikaGoogle. Iya kukuvumela ukuba wenze iintengiso ezilula. Ukuba ufuna ukubanefuthe kubaphulaphuli ekujolise kubo kufuneka uyisebenzise.
Ukukhetha uhlobo lochwethezo oluchanekileyo kubalulekile njengoko imibala kunye neemilo zoyilo lwethu zithatha, la manyathelo anokukunceda ukhethe ngokuchanekileyo
Uninzi lwabayili luyinto yokuphazamiseka kuzo zonke izinto ezisendleleni, ezi zixhobo zilandelayo ziya kukunceda ujonge umsebenzi wakho
Imisebenzi yethu yokwenza izinto ezininzi ichaphazeleka kwizinto ezahlukeneyo ezisiphazamisayo, ezi ndlela zilandelayo ziya kukunceda
Ukuba noqeqesho kumhla wethu kubalulekile, imisebenzi elula njengokwenza ibhedi inokusinceda senze oku, sikunika iingcebiso zokukufezekisa
Sikufundisa indlela yokujikeleza ividiyo kwikhompyuter yakho okanye kwiselfowuni ngeendlela ezikhethileyo kwi-Intanethi kunye nokusetyenziswa kweMac, Windows, iOS okanye i-Android.
Kuya kufuneka siyazi imiyalelo emithandathu yokuhambisa ikhadi lakho. Le mithetho ilishumi iya kuba luncedo ukutsala umdla. Ukuthathela ingqalelo, ukuba xa unika ikhadi kwilaphu, awuyi kuba linani elinobabalo
Imithetho eli-10 yokukhokela iprojekthi yoyilo kwiqela lomsebenzi, ukudala imeko-bume elungileyo neqondayo yeprojekthi leyo ikhoyo, indlela yokuyiphembelela, ukuyikhuthaza kunye nokwenza imeko yokuthembana.
Ukuba kukho ugqatso olude kuneesekethe zeFomula 1, lulo ugqatso lokukhangela kuGoogle. Ezi ngcebiso zi-4 ziya kukunceda usondele kwindawo yokuqala ukuqala ngombutho wakho kwishishini lakho.
Ngaba unengxaki yokuzisa iprojekthi yakho entle ebomini ngenxa yomshicileli wakho ongasebenzi kakuhle? Inqaku elenziwe ngu-NTT Toner licacisa ukuba ungenza njani ukuba umshicileli wakho uMzalwana aqonde iikhatriji ezifanelekileyo.
Yenza istudiyo esimangalisayo sokusebenza
Ukuyila isifundo yoyilo esisombulula zonke iingxaki ezinokuvela kwixesha elizayo kunzima, kodwa ukuba silandela isikhokelo esilula singasifumana ngokufanelekileyo okokuqala, njengokubeka umenzi wekofu.
Ukudinwa okuyilayo kuyinto eqhelekileyo kweli xesha lethu. Ngenxa yevolumu ephezulu yomsebenzi onzima kunye noxinzelelo lobomi obuxakekileyo. Kukho izicelo ezinokukunceda kancinci ukusombulula ukudinwa okuyilayo ngemali encinci.
Ngaba wakhe wacinga ukuba uneepensile ezininzi ezinemibala kwaye yayilihlazo ukuba zigcinwe kude okanye ziyadika ngaphezulu kwedesika? Kule nqaku sikubonisa ukuba loluphi uhlobo lweepensile ezinemibala ezenzileyo ukubonisa iimveliso zazo ngendlela enomtsalane.
Hambisa udliwanondlebe nezi ngcebiso zilandelayo zokuqhubeka kwakho. Ngale nto, uya kusondela ekuyilungiseni nasekusondeleni emsebenzini wakho.
Iimpazamo ezine ezijongela phantsi ubuchule ukusukela ekubeni singabantwana ngabantu abadala abasingqongileyo, becinga ukuba ayiloxesha lokubafundisa izinto ezithile ngenxa "yemida" yabo.
Ukukhetha indawo elungileyo kwinkampani yakho kunokuba kubalulekile kwiwebhu. Ukuba senza igama elingalunganga okanye sikhethe idomeyini engalunganga, sinokuphazama ngonaphakade
Ukufunda ukuzoba kuya kuxhomekeka kumzamo umntu awenzayo kunye nomonde nokunyamezela ukuqhubeka nokuvela kumzobo.
Namhlanje siza kuthetha ngesitampu se-clone, indlela ekhawulezayo yokongeza okanye yokususa izinto kumfanekiso. Ngaba uyazi ukuba ungayisebenzisa njani ngokuchanekileyo?
Funda ukuthatha iifoto ngobuchwephesha be-HDR obuzisa iinkcukacha ngakumbi kunye nokuthelekisa kwifoto. Sifundisa indlela yokwenza i-HDR kwiPhotohsop
Amathontsi emvula angayinyani njengoko enziwe kwimifanekiso ethile. Siza kuchaza indlela yokuyila, kunye nendlela yokwenza ukuba zibonakale ziyinyani.
Ngaba ukhe wafuna ukwazi ukuba ujongeka njani njengomlinganiswa kumabonwakude okanye kwimuvi? Kule tutorial sifundisa ukuba ube yiHulk ...
Olu qeqesho luya kukufundisa ukongeza isithunzi ebusweni. Oku kunokusetyenziswa nakwamanye amalungu omzimba apho ufuna ukulinganisa khona
Namhlanje siza kufunda ukuthatha uhambo oluya nakweyiphi na indawo oyifunayo, kodwa olu hambo alunakuba ngaphandle kokuhamba ekhaya.
Okwangoku sizise isifundo esikhethekileyo seHalloween, ukukufumana ngaphambi komdlalo. Siza kukufundisa ukuba unike iinwele zakho ezinemibala eqaqambileyo ehambelana nomsitho.
Ukukhohlisa izandla nge-Photoshop.
Icebo kuwe ofuna ukwenza isibhengezo sezandla, iinzipho, nokucoca. Okanye kuwe onokonwaba kuphela.
Umboniso weplate ungonwabisa kwaye ukhawuleze ukwenza. Nanga amanye amaqhinga okulinganisa ipleyiti epheleleyo, kunye neFotohop.
Kule tutorial siza kukufundisa ukuqaqambisa into, okanye icandelo elithile, ukusuka kumfanekiso wonke. Ukukhanya ngakumbi, umbala ongaphezulu, isiphumo osifunayo.
Ngaba uthathe ifoto kodwa washiywa kukukhanya kancinci okanye ukhanyiselwe kancinci kunokuba ubufuna? Sukuyicima, apha sikunceda ukuyilungisa.
Ukulawula ixesha levidiyo ngeAdobe Premiere kulula kakhulu ukuyenza kwaye kufezekisa iziphumo zokuyila. Funda ukuhlela ngokukhawuleza.
Guqula umbala weenwele kunye neFotohop ngokukhawuleza kwaye ngokulula ukuze uzame enye indlela kunye nezitayile ezothusayo.
Ukubaluleka kweemilo kwii-logo kunye nombala wazo ukwenza uphawu lwakho olunokwaziwa kwihlabathi liphela.
Isixhobo sokucinga okanye ukuqiqa njengesixhobo sokuphuhlisa iiprojekthi ezibonakalayo kuyilungele ukuvula ingqondo nokusinceda ukuba senze iiprojekthi.
Imigaqo yokunxibelelana noyilo lweselfowuni olufunekayo kwiprojekthi yakho kuphuhliso lwezicelo zenoveli kunye nokutsala uluntu.
Dibana neCanva, inkqubo elula yoyilo yehlabathi. Isixhobo sewebhu esitsha kufuneka wenze uyilo lwakho ngokulula.
Iingcebiso ezili-10 ezilula eziza kunceda ukuze umsebenzi wakho wokuqala uvele ugqibelele kwaye ke ujongeke njengengcali yoyilo
Nazi iingcebiso zokufota ezingamashumi asibhozo zokukunceda ukuphucula ukuziqhelanisa nomhlaba wokudubula.
Ulawulo lwamehlo: Intsingiselo kunye nentlawulo yokomfuziselo kumzobo
Ngaba uvile ngolawulo lwamehlo kufoto? Ngaba uyazi ukuba ungayisebenzisa njani? Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba kungantoni.
Apha sikunika iingcebiso ezili-11 ekufuneka uzithathele ingqalelo xa usenza uyilo olulungileyo, okanye uyilo oluphendulayo. Nika ingqalelo enkulu!
Iikona ezijikelezileyo zeeMilo ezinomfanekiso we-CS5
Ukhuphelo ngaphandle kokulinda kwi-rapishare
Ukukhuphela iifayile kwiRapidShare ngaphandle kokulinda, ngokungathi uneakhawunti yePremidshare yePrimiyamu yinto ezinikezelwa ngamanye amaziko anje ngezi:…